Andiany 860SL Swinging Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Ny Series 860SL Swinging Dragon® dredge dia fitambarana tohatra mihetsiketsika sy dredge suction cutter mahazatra afaka mahatratra ny lalina lalina hatramin'ny 30 '(9.1 m). Ity maodely tohatra fikotranan'ny dredge maharitra ity dia ahafahana miasa amin'ny renirano na fantsona tery. Ary koa, ny 860SL dia mety indrindra amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fasika sy vatokely, fanesorana ny antsanga fitehirizan-tany, ary tetikasan-dàlana fitetezana antonony ary fikojakojana ny lalan-drano.
Ny dredge azo entina dia mora atambatra miaraka amin'ny ezaka kely eo an-toerana.
Ny milina mihidy feno dia manome fiarovana sy efitrano malalaka hikolokoloana mahazatra.
Ny fomba fitrandrahana mahazatra dia ahafahana manaparitaka sakany malalaka ho an'ny fanapahana tsara indrindra sy famokarana mahomby.
Hizaha habe: 14 "x 14" (350 mm x 350 mm)
Fihoarana ambany indrindra fandatsahana: 30 ′ (9.1 m)
Valizy fanalefahana sisin-tsofina.
Mipoitra ny vatofantsika.
Rafitra fametrahana ny dredge.
Rafitra famoretana afo ny maotera.
Safidy fanampiny azo alaina amin'ny fangatahana.